Maalif abbaa Gadaa balleessaa malee hiitu jennee iyyaannoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMaalif abbaa Gadaa balleessaa malee hiitu jennee iyyaannoo
Maalif abbaa Gadaa balleessaa malee hiitu jennee iyyaannoo qaama bulchiinsa godinaatti dhiyeefannus deebii quubsaa dhabne.
KMN:- Ebla 10/2020
Godina oromoo walloo aanaa arxummaa fursii irraa badii tokko malee sababa warra uummata saamuu waliin hin hojjedhu hannaaf kijiba akkasumas saamicha amantiin koos tahe seerri sheeriyaa naaf hin ayyamu jedhee hattootatti haqa jiru himeef abbaan keenya abbaan Gadaa Hasan Haajii hidhamuu jiraattonni KMNiif turaniiru.
Kanumaan wal qabatee qaamni tokko ijaamnee dhimma abbaa gadaa aanaa arxummaa fursii kana bulchiinsa godina saba oromoo walloo gaaffannee turre. Bulchiinsi godinaa kunis of tuulummaaf jibba ilmaan sabboontota oromoo walloo irraa qabu ifa guyyaan mul’iseera. Dhimmi abbaa Gadaa Hasan Haajii nan ilaallatu mootummaa federaalaatu hidhe jedhee waan jiruuf ammas qeerroof sabboontootni oromoo walloo dubbii kana hubadhaa jechuu barbaanna. Qaamni federaalaa uummata nagaa hidhuuf gidirsu eenyu akka tahe ammas qorannoo geggessina.
Itti dabaluun bulchiinsa godina saba oromoo walloo fi bulchiinsa aanaa arxummaa fursiif ammas gaaffii nuuf hiikaa jedhu ni dhiheessina. Murtii kana hordofnee yoo abbaa gadaa Hasan Haajii hiikuu didaniif waamicha sabummaa geggessuun dirqama akka tahe asumaan hubachiifna.